Teknụzụ Blockchain ka bidoro, mana ọ na-atọ ụtọ ịhụ ihe ọhụụ na-eme gburugburu ya ugbu a. Ọbara netwọk bụ otu n'ime ihe atụ ndị ahụ, na-agbatị ike ọkụ kọmputa na ngwaọrụ ọ bụla dị na weebụ. Na-eche banyere ọtụtụ narị nde CPU ndị na-anọdụ ala nkịtị ruo ọtụtụ awa n'otu oge - ka na-eji ụfọdụ ike, ka na-achọ nlekọta, mana na-efu ego.
Ọbara netwọk emeela nnukwu kọmputa kachasị elu n'ụwa site na iji ike mgbakọ na-arụ ọrụ nke latent ngwaọrụ. N'okwu layman, nke ahụ pụtara mgbe ọ bụla akụrụngwa dịka laptọọpụ, smartphones na mbadamba anaghị eji, Hypernet nwere ike ijikwa ike ahụ, yabụ weebụsaịtị anaghị ada ada n'ihi oke ibu sava. Kedu ihe ọzọ, ebe ọ bụ na ekesara ma gbasaa ike a, enwere ohere ọ bụla na ihe ọ bụla nwere mmetụta, data onwe onye anakọtara n'oge azụmahịa eCommerce nwere ike imebi.